Iza ireo 11 niharam-boina tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona indrindra tao Oahu?
Jona 23, 2019 0 Namaky 2 aho
Naharitra andro maromaro ny tsikiny. Toy izao no namaritan'ny namana ny iray amin'ireo olona 11 nanjavona omaly alina.
Ny Northshore of Oahu dia nanjary an'ity boky ity. Ny vondrom-piarahamoninay iray manontolo eto dia ao anaty fahatairana sy tsy finoana. Izany dia aorian'ny be dia be maty ny olona omaly alina amin'ny loza ara-barotra mahatsiravina indrindra tany Hawaii nandritra ny 20 taona mahery.
Dillingham Airfield any Mokulea dia mikatona mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny. Anisan'ireo iharan'izany ireo mpizahatany telo farafahakeliny izay mitady hiaina traikefa azo antoka matetika amin'ny parachuting tandem. Maty ihany koa ny mpiasa 6 na mihoatra ao amin'ny Ivotoerana Parachute ao Oahu. Ny fiaramanidin'izy ireo dia nirehitra niaraka tamin'ny olona rehetra tao anaty fiara rehefa nianjera rehefa avy nihetsika tamin'ny 6.30 ora sy sasany hariva ny zoma hariva.
Hatreto dia anarana telo monja tamin'ireo iraika ambin'ny folo no tafavoaka. Ny iray dia i Mike Martin, mpampianatra iray izay nanorim-ponenana tany Haleiwa. Tiany ny milalao onja, ary mahatsiaro azy ho toy ny Daredevil ny namana ”. Nilaza ny namana fa niaina ny androm-piainany manontolo andro isan'andro
Araka ny vaovao KITV4, ny fianakavian'ny niharam-boina iray hafa dia nanondro an'i Casey Williamson, avy any Oklahoma. Tiany ny traikefa nahafinaritra ary mpampianatra an-danitra any Hawaii izy. Casey Williamson 29 taona dia "tia ny fiainana sy ny olona." Nifindra tany Hawaii 18 volana lasa izay mba hiasa ao amin'ny Center Parachute ao Oahu amin'ny maha-mpanao sary an-tsary azy - niasa tamin'ny fanatontosana fiakarana 1,000 tamin'ny faran'ny taona 2019 izy.
Casey Williams Maty tamin'ny 21 Jona tao Oahu tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina
Ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy dia nandefa tao amin'ny Facebook-ny: Ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko, Casey dia maty tamin'ny fomba mahatsiravina tamin'ny 21 Jona teo am-panatontosana torolàlana ho an'ny lanitra tany avaratr'i North Shore ao Oahu. Ho anao rehetra, io nahalala Case niainany isan'andro tamin'ny tsiky izay nandeha nandritra ny andro maro. Kara Craig dia nilaza momba an'i Casey: namako akaiky izay nampahery ahy foana hatanjaka rehefa tsy noheveriko fa afaka aho! Malahelo anao aho, ry sakaiza,
Larry Lemester kosa no namoy ny ainy fahatelo. Nandefa tao amin'ny Facebook-ny ny namany Amada Ashley: Tamin'ny fahavaratry ny taona 2011 – sambatra aho nifankahita tamin'i Larry. Izy no nanangana ny skydiving raharaham-barotra tao amin'ny seranam-piaramanidina Kessler ary nisoratra anarana handeha aho. Nanontany an'i Larry aho raha afaka manoratra momba izany ho an'ny gazety eo an-toerana ary hoy izy hoe eny. Izany dia midika fa nanaraka an'i Larry nanodidina ny DZ nandritra ny tolakandro maromaro aho niezaka nianatra momba azy sy ny skydiving. Namaly tamim-paharetana sy tamim-paharetana ny fanontaniako tsy misy farany izy ary nampifaly ahy tamin'ny firesahana tamim-pahatsorana momba ny fiainany sy ny zava-niainany tamin'ny skydiving.. Tamin'ny andro nanaovanay ny tandem dia tsy afaka nahagaga ahy kokoa - i Larry dia mpanazava lanitra mahay ary nanentana ny fahatokisana tanteraka fotsiny izy fa tsy teo amin'ny hafanam-pon'ilay tabilao. Rehefa natahotra be aho - tsy azo antoka ary marefo izaitsizy dia izy no mpitari-dalana nitety ahy tamin'ilay fihetseham-po voalohany ary avy eo dia novonoinay ilay fitsambikinana. Nahagaga. Tsy ny fomba fijery vaovao momba ny Renirano Vaovao fotsiny no nomeny ahy fa ny famerenako ny tenako ary nanampy fahatokisan-tena hahazoako aorian'ny fiainana. Ny eritreritro dia miaraka amin'ny fianakaviany, ny namany ary ny fiarahamonina misy azy.
Hoy i Sarah Child: Lehilahy mahatalanjona. Misaotra nanome ahy elatra, Larry Lemaster. Tsy hohadinoiko mihitsy ny hatsaram-panahinao sy ny fiahianao. Mampanantena ny handoa izany aho mandritra ny androko sisa. Lanitra Manga, sakaiza.
Lanitra manga Larry.
More on: Oahu | Airport
Ny ITA Airways dia mpandraharaha italiana voalohany an'ny Airbus A350 Airport|
New Saint John-Toronto sidina amin'ny Swoop Airport|
Previous Nampitandrina ireo mpandeha hiala an'i Georgia i Russia ary hampiato ny sidina ara-barotra ataon'ny Georgian Airlines
Manaraka 'Fanaronana lesoka tsy fahita hatrizay': Boeing notorian'ireo mpanamory fiaramanidina MAX 737